Messi oo rikoor cusub sameeyay - BBC Somali
Messi oo rikoor cusub sameeyay
Image caption Lionel Messi oo ciyaaraha Spain u dhigay rikoor cusub
Ciyaaryahanka u dhashay waddanka Argentina ayaa dhaliyay saddex gool ciyaartii ay xalay kooxdiisa la yeelatay kooxda Sevila, taasina isku darka goolasha uu ka dhaliyay horyaalka La Liga waxa ay ka dhigtay 253 gool.
Messi ayaa jabiyay rikoorkii uu 1955-tii uu dhigay weeraryahankii kooxda Athletico Bilbao, Telmo Zarra, kaasi oo kooxdaasi u dheelayay 15 sano.
Messi ayaa Spain yimid isagoo 13 sano jir ah, shakina kuma aanu jirin xirfaddiisa heerka sare ah ee kubadda cagta, hasayee waxaa uur kutaalo ku haysay dhibaatooyin dhanka korniinka ah, waxa uuna u baahnaa daweyn dhanka hormone-ka ah oo qaali ah, taasi oo kooxdiisii Argentina ay diiday inay bixiso.
Barcelona ayaa go’aansatay inay bixiso kharashka ku baxaya caafimaadka ciyaaryahanka iyo qoyskiisa, taasoo u sahashay in qoyskiisa ay degaan magaalada Barcelona.
Messi ayaa markiiba horumar ka sameeyay kooxda yaryarka ee Barcelona, iyadoo tan iyo markii uu si rasmi ah ugu soo biiray kooxda waa weyn uu jabiyay rikooro u yaallay kubadda cagta Spain iyo Yurub.